UK oo yeelatay Reysulwasaare meelo badan uga eg Donald Trump. - NorSom News
UK oo yeelatay Reysulwasaare meelo badan uga eg Donald Trump.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalka Ingiriiska, Boris Johnson ayaa saacad kahor loo doortay Reysulwasaaraha cusub ee dalweynaha UK, isaga oo badali doono Theresa May oo isbuucyo kahor iscasishay.
XYS: Shirkada: Sharcigu xaqiisa ma siiyo, qofkii aamusa, nala soo xiriir, si aan kiiskaaga u maqalno, talana kaaga siino: 45970350 ama riix sawirka.
Previous articleNorway: Wasiir sanadkii tagay faa´iiday 15 milyan Kr.
Next articleNorway: 10-kan kuliyadood ayaa sanadkan jaamacadaha ugu adkaa in lasoo galo.